UPhononongo lweVolife engenaCordless Handheld | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Ikhaya, Reviews
Ngesi sihlandlo sinethuba lokuvavanya igajethi entsha yekhaya, Isicoci seHolife esingenacingo esiphathwayo, Imveliso ngexabiso elinomdla kuphela le- € 59,99 isinika isiphumo esihle sokucoca kunye nokulula kokungafuneki kweentambo ngombulelo kwibhetri yayo yangaphakathi esisinika imizuzu engama-30 yokusebenza. Kodwa nokuba ungumfundi weActualidad Gadget ungasifumana isicoci sokucoca ngesaphulelo esikhethekileyo se- € 19 ukuze Akukho mveliso ifunyenweyo. Makhe sibone ngokweenkcukacha le mveliso kunye nendlela yokufumana isaphulelo.
1 Umxholo wephakheji
2 Usebenzisa isiCoci esiCociweyo seHolife engenantambo
3 Ukucoca isicoci sokucoca iHolife
4 Uyithenga njani i-aspirate yeHolife
7 Igalari yefoto yeHolife yokucoca ifoto
Ngokukhawuleza xa sivula ibhokisi sifumana isicoci sokucoca, isiseko sokutshaja, 2 amacebo okucoca uthuli, iiseti ezintathu zemibhobho etshintshayo kunye nebrashi yokucoca. Inkqubo ye- Umgangatho wezinto kunye nokuchukumisa isicoci sokucoca ulungile; Ngokuchasene noko, isiseko sokutshaja sibonakala singenamsebenzi, sinobunzima obuncinci kodwa siyawenza umsebenzi waso, okokugcina isicoci se-vacuum sime nkqo ngelixa ubiza.
Uyilo lwemveliso luhle kakhulu, luncinci kwaye lubonelela ngocingo lwangoku kuyo yonke iseti.
Usebenzisa isiCoci esiCociweyo seHolife engenantambo
Kwiiyure eziyi-3-4 sinesicoci sokucoca ngokupheleleyo kwaye sikulungele ukusetyenziswa. yakhe 2000 mAh ibhetri yangaphakathi ivumela ukuya kwi Imizuzu engama-30 yokucoca ungaphazanyiswa. Oku kwanele ngokwesiqhelo ukusetyenziswa kolu hlobo lwesixhobo kuba ziyilelwe ukucoca iindawo ezithile ezifana neesofa, izitulo, imoto okanye ukucoca umhlaba kodwa kwindawo ethe ngqo apho ulahle khona into .
Isixhobo esilula ngoku kuphela 1,7kg ubunzima. Oku kunye noyilo lwe-ergonomic kwenza ukuba kube lula ukusebenzisa kwaye asidinwa.
Ine a I-90W ilinganise amandla kunye ne-22W yokutsala, ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba yintoni esiza kuyidinga kule vacuum cleaner; Nangona okwangoku kufuneka ube nezantya ezininzi xa ungadingi ukuba namandla aphezulu kwaye ke wandise ubomi bebhetri ngandlela thile. Nangona ithathela ingqalelo ukuba iyimveliso engaphantsi kwe- € 60 iyaqondakala ukuba ayinayo.
Kwiphepha lobugcisa sinokufunda ukuba ivelisa ngokusesikweni ingxolo ye-78 dB. Ngokwendlela esibona ngayo ngexesha lokusetyenziswa kwayo, ayisisixhobo esithuleyo kodwa ayingxoli kakhulu. Masithi ngumndilili wento elindelekileyo kolu luhlu lweemveliso.
Ukucoca isicoci sokucoca iHolife
Nje ukuba sigqibe ukusebenzisa isicoci se-vacuum, lixesha lokuba siyicoce ukuze siyishiye intsha de isetyenziswe kwakhona. Kungumsebenzi olula kakhulu, kufuneka ucofe nje kwiqhosha elingaphezulu kwento yokucoca kwaye unakho isuse itanki ngokuyitsala ngobunono. Nje ukuba idiphozithi yahlulwe kufuneka nje ulahle ubumdaka obuqokelelwe kuwo emgqomeni, yicoce kakuhle ngamanzi adikidiki kwaye uyiyeke yome ngaphambi kokuyibuyisela kumatshini wokucoca.
Uyithenga njani i-aspirate yeHolife
Isicoci seHolife esingasebenziyo esingenantambo sokucoca siyathengiswa eAmazon ngexabiso le- € 59,99 kodwa ngoku Ungayifumana ngeActualidad Gadget nge- € 40,99 kuphela. Ukwenza oku kuya kufuneka usebenzise i Ikhuphoni lesaphulelo Y6522G8L xa ubeka iodolo yakho kwiAmazon. Akukho mveliso ifunyenweyoSebenzisa coupon Y6522G8L kwaye ufumane esi sicoceko ngexabiso elifanelekileyo.
Isicoci sokucoca ngesandla esingasebenziyo seHolife
Imizuzu engama-30 yokuzimela
Isantya esinye kuphela sokubaleka
Igalari yefoto yeHolife yokucoca ifoto
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » UHolife uphethe ngesandla engenacingo engenanto engenantambo